मलामी जान बिर्सेछऊ त ? – Sthaniya Patra
मलामी जान बिर्सेछऊ त ?
By स्थानीय पत्र On Mar 3, 2022
नाम पनि कति गजब छ “गाउँ” । प्राय सबैलाई गाउँ मन पर्छ । गाउँ राम्रो भए जस्तै राम्रा हुन्छन् गाउँका मान्छेहरु । भाषा, खानपिन, संस्कार संस्कृति सबै गाउँको अर्गानिक नै हुन्छ । प्राय मान्छेहरुलाई अर्गानिक नै मन पर्छ, मलाई मन परेजस्तै । पछिल्लो अबस्थामा गाउँका सबै युवाहरु देश छोडेर विदेश गएको कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नी हैन र ? गाउँघर अचेल युवा विहिन बन्दै गइरहेको छ ।
मानव जीवन भनेको मान्छेहरुको जालोमा जेलिएर जिउने जीवन हो । मान्छेहरको जालोमा नजेलिएर जिउन खोज्ने मान्छे मान्छे नै हैन भन्दा फरक नपर्ला । गाउँ भनेको धेरै परिवार मिलेर बनेको एउटा सुन्दर बस्ती हो । यो बस्तीलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा भनेको त्यही बस्तीमा बसोबास गर्ने सबै परिवारको हो । गाउँमा बस्नै कुनै परिवार समाजदेखि अलग भएर बस्न खोज्छ भने त्यसलाई गाउँको सदस्य हैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । मानव जीवनमा दुईवटा कुरा सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् जन्मनु र मर्नु । यी दुबै कुरामा समाजको सबै भन्दा ठूलो हात हुनेगर्छ ।
गाउँ युवा विहिन भएको यस्तो दर्दनाक अबस्थामा झन् गाउँमा कुनै एउटा परिवारलाई दुःख पर्यो भने सबै गाउँलेहरुले साथ दिनु नितान्त आवश्यक छ । यदि गाउँमा कसैको विहे भयो जन्त नजाने र कसैको मृत्यु भयो भने मलाम नजाने मान्छे मेरो विचारमा त्यो गाउँको सदस्य नै हैन । गाउँमा सानो होस् या ठूलो जुनसुकै व्यक्तिको निधन भयो भने एक दिन पुरा गाउँ नै शोकमा डुब्नुपर्छ । प्रत्येक परिवारबाट मलाम दिन जानुपर्छ । मृत्यू सबैको हुन्छ र सबैलाई मलामी चाहिन्छ । अझ सजिलो भाषामा भन्नपर्दा मरेपछि सबैलाई जलाउँनको लागि दाउरा चाहिन्छ । काठमाण्डौंको पशुपति आर्यघाटमा जस्तो किन्ने दाउरमा गाउँमा पाईदैन । मान्छेले नै बोक्नुपर्छ । त्यसैले गाउँमा एउटा व्यक्तिको निधन भयो भने परिवारलाई सान्त्वना दिनको लागि सबै गाउँले मलाम जानैपर्छ ।
गाउँमा कसैको निधन भयो भने तपाईँले तपाईँको जस्तोसुकै महत्वपूर्ण काम भएपनि छोडेर मलाम जाने निर्णय गर्नुपर्छ । यदि भोली तपाईको निधन भयो भने तपाईलाई पनि त मलाम चाहिन्छ होला नी ? एउटा व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनकालमा गाउँमा धेरै ठूलो योगदान पुर्याएको हुन्छ । स्कुलको काम गरेको हुन्छ, बाटोघाटो निमार्ण गरेको हुन्छ, तपाईहरुसँग कहिले काहिँ सँगै हिडेर सहकार्य गरेको हुन्छ । उसको सम्बन्ध गाउँको राजनीतिक आर्थिक, साँस्कृतिक पक्ष सबैसँग जोडिएको हुन्छ । उसले यति ठूलो योगदान समाजलाई छोडेर जाँदा तपाई उसको निधन हुँदाखेरी मलाम जानै विर्सिदिने ? उसको निधन र उसको परिवारको रोधन भन्दा तपाईको एक दिनको काम ठूलो भयो ? त्यसैले प्रीय मित्रहरु ढिलो चाँडो हो तपाईँ र म पनि संसार छोडेर एक दिन हामी जानेनै छौँ । त्यतिखेर हामीलाई मलामी चाहिन्छ नै ।
तपाईँ र मेरो परिवारलाई सान्त्वना दिने मान्छे चाहिन्छ नै । त्यहि चाहिने भएकोले गाउँमा कसैको निधन भयो भने सबै गाउँमा मानिसहरु मलाम जानैपर्छ । शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना दिनैपर्छ । यहि नै समाजको जिम्मेवारी हो । यदि तपाई गाउँमा कसैको निधन भयो भने मलाम जान वास्ता गर्नुभएन भने अझै तपाईँको चेतनाको विकास भएको छैन भन्ने बुझिन्छ । तपाईँ त्यो गाउँको सदस्य हो भन्ने पनि मलाई भावनात्मक रुपमा शंका लाग्छ । जात र बर्ग हेरर ब्यवहार गर्ने गाउँको एउटा सदस्य त्यो चेतना नभएको सदस्य बुझिन्छ ।
यदि चेतना भएको गाउँको सदस्य हो भने ऊ जुनसुकै व्यक्तिको पनि मलाम जान्छ र शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना दिन्छ । यदि जनप्रतिनिधहरु नै समाजमा कोही निधन हुँदा मलाम जाँदैन भने आउने चुनावमा उसलाई भोट पनि नहाल्दा राम्रै होला । किनकि समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजानको लागि जनप्रतिनिधिको ठूलो हात हुन्छ यस्तो अबस्थामा उनीहरुले नै घात गरेपछि केको भोट हाल्नु ? त्यसैले प्रिय मित्र मर्दा पर्दा समाज काम लाग्छ । तपाई गाउँ समाजको लागि काम लाग्ने व्यक्ति बन्नुहोस् । तपाईँलाई पनि जन्ती चाहिन्छ अनि तपाईलाई नै मलामी चाहिन्छ ।ratopati
युगान्डासँगको दोस्रो खेलमा नेपाल १ विकेटले पराजित
तिलोत्तमाको मतगणनामा कर्मचारीबाटै धाँधली भएपछि पुनः गणना गर्न दलहरूको माग
यस वर्षको इच्छुक पुरस्कार निर्जीव र डाँगीलाई
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी
हराएको ६ दिन हुदाँ समेत अझै फेला परेनन बालक
रणनैतिक मोर्चा बारे अवधारणा तय गर्न क्रान्तिकारी माओवादीको…
तीन दिनपछि सरावल गाउँपालिकाकाे दैनिकी कामकाज पुनः सुचारु
२३ लाखसहित क्यासिनोबाट १० जना पक्राउ
नवलपरासीमा पिकअप सहित ३ लाख भन्दा बढीको मालसामान बरामद
आन्दोलन थप शसक्त बनाउने तयारीका लागि प्रचण्ड माधव समुहको…